प्लेनमा ज’न्मिएका ब’च्चाहरूले कुन देशको ना’गरिकता पा’उँछन् ? – ramechhapkhabar.com
प्लेनमा ज’न्मिएका ब’च्चाहरूले कुन देशको ना’गरिकता पा’उँछन् ?
प्लेनमा बच्चा जन्मियो भने उक्त बच्चाले कुन देशको नागरिकता पाउला त ? यो हामी सबैको दिमागमा घुमिरहेको प्रश्न हुनसक्छ । तर, कतिपयले भने थाहा पाइसकेको हुन सक्छ । विशेषतः यस्तो अवस्था आइपर्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न देशले छुट्टाछुट्टै नियमहरू बनाएका हुन्छन् ।
उदाहरणका लागि हाम्रै छिमेकी देश भारतमा कुनै पनि गर्भवती महिलाले ७ महिनाको गर्भावस्थामा प्लेनमा यात्रा गर्न नपाउने व्यवस्था छ । तर, आपत्कालिन अवस्थामा उनीहरूले प्लेनमा यात्रा गर्न पाउनेछन् । सामान्यतया प्लेनमा जन्मिएका बच्चाहरूले बच्चा जन्मिँदा प्लेन कुन देशको सिमानामाथि उडेको छ सोही देशको नागरिकता पाउने नियम छ । कतिपय अवस्थामा प्लेनमा जन्मिने बच्चाहरूले उडेको”’
देश र ल्याण्ड हुने देशकै नागरिकता पाउने व्यवस्था पनि छ । यदी प्लेनमा नै बच्चाको जन्म भएको अवस्था उक्त बच्चाका आमाबुवाहरूलाई पनि कुन देशको नागरिक बनाउने भन्ने अधिकार दिइएको हुन्छ ।यस्ता घटना एकदमै कम हुन्छन् । पछिल्लो समय २०२० को सेप्टेम्बरमा युकेबाट इजिप्ट गइरहेको प्लेनमा एक जना बच्चाको जन्म भएको थियो ।
एजेन्सी । भारतको जयपुरस्थित घाटगेट इलाकाको एउटा कुखुरलाले एकै दिनमा ३६ वटा अण्डा पारेर सबैलाई चकित पारेको छ ।
रइस खान नामक व्यक्तिले पालेको कुखुराले २४ घण्टामा ३५ वटा अण्डा पारेपछि अहिले उक्त कुखुरालाई हेर्न र देख्न टाढा टाढाबाट मानिसहरु गइरहेका छन् । उक्त कुखुरालाई रमजानको महिनामा ईश्वरको चमत्कार भन्दै मानिसहरुले अनौठो कुखुराको ट्याग लगाएका छन् ।
रइस खानले उक्त कुखुरालाई बजारबाट ल्याए लगत्तै सुरुमा १२ घण्टा भित्रैमा १६ वटा अण्डा पारेको र पछि त्यो क्रम बढाउँदै २४ घण्टामा ३६ वटा अण्डा पारेको उनले कुखुरा हेर्न आएका आगन्तुकसँग बताए । यो विषयको अहिलेसम्म आधिकारिक पुष्टी भने भइसकेको छैन ।